v 1.0 တုန်းက နံပါတ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲအဓိကထားလိုက်ပြီး ရှမ်းလိုကျ Ctrl နဲ့တွဲရိုက်ဖို့လုပ်လိုက်မိတယ်... ဒါတောင် 1 က တခြား character မှားပြီးထည့်မိထားတယ်... အခု ရှမ်းပြည်ကအစ်ကိုတစ်ယောက်လှမ်းပြောလို့ ပြန်ပြီး update လုပ်ထားပါတယ်... လိုတာရှိရင် ပြောကြပါဦး... :D Update: 5-1-18 ပါဠိမှာအသုံးပြုတဲ့မြန်မာအက္ခရာ သေးသေးတင်(ံ) ကျန်နေခဲ့လို့ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ Alt + h ပါ။ https://www.dropbox.com/s/p761mtrzjnfny95/Shan%20Uni-KB%20v1.2.dmg?dl=0 Credit-Naing Ye Minn
Sangkran Calculator 💐💐💐 https://www.mediafire.com/download/68682su0a5ap2in
Myanmar3 ကနေ Pyidaungsu Font ပြောင်းသုံးရမယ်ဆိုလို့ အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားသူတွေအတွက်တော့ Myanmar3 ရော Pyidaungsu ရော နှစ်ခုလုံးက Unicode စံစနစ်ကိုလိုက်နာထားတဲ့ Font အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောင်းသုံးလိုက်လို့ စာရိုက်ရတဲ့နေရာမှာ အပြောင်းအလဲ စိုးစဉ်းမြူမှုန်မှ ရှိမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ Pyidaungsu Font က Myanmar3 ထက်ဘာပိုသာလဲဆိုရင် တိုင်းရင်းသားစာပေတွေပါ စုပေါင်းပါဝင်လာတာက ပိုသာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi ကနေ Pyidaungsu ပြောင်းသုံးမယ့် ပြည်သူတွေအတွက်တော့ အခက်အခဲလေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးမယ့် Unicode စံစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိပါတယ်။ Warmly welcome ပါ။ ပြောချင်တာတော့ Zawgyi ကို စွန့်ခွာပါတော့လို့။ တကယ်တော့ Unicode က TimesNewRoman, Arial, Roboto, Calibri, Pyidaungsu, Myanmar3, Zawgyi-One, အစရှိတဲ့ Font တွေလို မျိုး Font တခုမဟုတ်ပါဘူး။ Unicode ဆိုတာ စံစနစ်ကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။ TimeNewsRoman Font ရဲ့ A နဲ့ Arial Font ရဲ့ A က ကြည့်ရတဲ့ပုံစံ( ထောင့်ချိုး ၊အနားသပ် စသည် )ကွဲပြားပေမယ့် မူရင်းအဓိပ္ပါယ်ကတော့ Aပါပဲ။ ဥပမာ ငြိမ်
By Htet Wai Aung - February 27, 2019
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ တတိယအကြိမ် E-Government လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ "ယခုအသုံးပြုနေသည့် Myanmar-3 Font ကိုမသုံးဘဲ International Standard Organization 10646 နှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသည့် PyiDaungSu Font စနစ်နှင့် Keyboard ကိုအသုံးပြုရန် ဦးတည်ရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ Electronic ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူအားလုံးသိရှိနားလည်ရေးအတွက် မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာဘာသာစကားစနစ်ကို ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း “ လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ လူအတော်များများက ယူနီကုတ်၊ဇော်ဂျီ ၊ မြန်မာ၃ တွေနဲ့ ရင်းနှီးနေကြပေမယ့် ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ အခုမှစပြီး ရင်းနှီးကြတာမျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Post ကနေပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုဖောင့်စနစ်နဲ့ Myanmar3 , ဇော်ဂျီတွေ ဘာကွာလဲဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ၁. Pyidaungsu Font ဆိုတာ ဇော်ဂျီမဟုတ်၊ ယူနီကုဒ်မဟုတ်တဲ့စနစ် အသစ်လား? မဟုတ်ပါဘူး။ Pyidaugsu Font က ယူနီကုဒ် စနစ်ကို အခြေခံထားတဲ့ ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar3 ကို အ
Smart word breaking and word wrapping for Burmese in LibreOffice 5. It'sabrand new feature. Previous version, LibreOffice4has no such feature. It'sadream come true for the heavy writer like me. If you haven't try LibreOffice before, I recommend you to give itatry: https://www.libreoffice.org/ PS: It work with every fonts. But you can take advantage of such awesome feature only with Unicode. Credit Sayar Ei Maung
Yun OS ဆိုတာ နာမည်ကြီး ဂျက်မ Alibaba online shopping website ပိုင်ရှင်ကထုတ်လိုက်တဲ့ OS ပါ။ AliYun OS လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ Yun ကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင် cloud လို့အဓိပ္ပါယ်ထွက်တဲ့အတွက် Cloud OS လို့ခေါ်လည်းမမှားပါဘူး။ ၂၀၁၁ ဇူလိုင် မှာ ပထမဆုံး Yun OS သုံးထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့ K-Touch W-700 ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။ Yun OS 3.1.6 ကစလို့ Flyme OS လို့ပြောင်းခေါ်ခဲ့ပြီး Meizu ဖုန်းများကိုပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ Yun OS ဟာ based on android လို့ပြောပေမယ့် androidရဲ့ အဓိကကျတဲ့ runtime environment ဖြစ်တဲ့ Dalvik ကိုမသုံးပါဘူး။ သူ့ကိုယ်ပိုင် environment တခုကို သီးသန့်ထုတ်ပြီး သုံးပါတယ်။တော်တော်ကြိမ်းတယ်နော် ။ ဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့အလုပ်သူလုပ်တာ။ သူကတော့ android ကို based လုပ်တယ်ဆိုတာက app တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ (သူ့ကိုယ်ပိုင် OS ထုတ်ရင် app တွေက သူပြန်ထုတ်နေရမှာလေ) Acer နဲ့လည်း ပြသနာတက်ထားတာ ရှိပါသေးတယ်။ acre က Yun OS ဖုန်းရောင်းမယ်လုပ်တာ သူကပေးမရောင်းတာ။ သူက miui လို community based , open source မဟုတ်ပါဘူး။ https://www.yunos.com/ ( ဒီပိုစ်ကို Google+ မှာရေးခဲ့တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ G+ ဖျက်တော့မယ်ဆိုလို
Flyme 7,Flyme6global version တင်ထားသော M6 note,Pro7,Pro7+,Pro6+,Mx6,M6s root permission မရသော ဖုန်းများတွင် root permission ရအောင်ပြုလုပ်နည်း ( Flyme7တင်ထားသော M5 note မရပါ) At your own risk. အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ flyme acc ဝင်ထားပါ Quick shortcutmaker apk ဒေါင်းပါ https://drive.google.com/file/d/1ztyM-zdgOfYeFbQlEmiiyChYairD3-iN/view?usp=drivesdk Setting,display and brightness, Easy mode ကို enable လုပ်ပါ Quick shortcutmaker apk ကိုဖွင့်ပါ Flyme ကိုရှာပါ တွေ့ရင်နှိပ်လိုက်ပါ com.meizu.root.openSystemRightactivity ကိုရှာပါ တွေ့ရင်တချက်နှိပ်ပါ Create လုပ်ပေးလိုက်ပါ Home screen ပေါ်မှာ flyme ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ် internet ဖွင့်ပြီး flyme ထဲဝင်လိုက်ပါ အောက်ဆုံးမှာ accept ကိုအမှန်ခြစ် ok နှိပ် မိမိflyme acc ထည့်ပေးလိုက်ပါ reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင် root permission ရပါပြီ ( easy mode ပြန်ထွက်လိုက်ပါ) မြန်မာဖောင့်အလှတွေသုံးလို့ရပါပြီ  Credit - Flyme Myanmar FB group ထဲက ကူးလာတာ။ ရေးတဲ့သူနာမည် မမှတ်မိတော့လို့
Wear OS မှာ သုံးဖို့ watch face တွေကို အင်တာနက်ပေါ်ရှာရင်း တွေ့တာတွေကို တစုတဝေးတည်း စုထားတာပါ။ များသောအားဖြင့် အကုန်နီးပါး xda မှာတွေ့တာ။ ဒီ zip ထဲမှာ ပါတာတွေက Asus Zenwatch3Casio WSD-F20 Diesel On Eporio Armani Fossil Q Explorist Huawei Watch 1st gen Huawei Watch 2nd Gen LG Watch W100 LG Watch R LG Watch Urbane LG Watch Urbane 2nd Edition Michael Kors Grayson **[NEW]** Moto 360 2nd Gen (UPDATED,2.0) **[NEW]** New Balance Nixon Mission Ustwo Old Watchfaces (Digilog etc) **[NEW]** Samsung Gear Live စတဲ့ watch တွေရဲ့ stock watch face တွေပါ။ Download zip pass က ho22 ပါ။ သတိပြုရမှာက --ZenWatch3 watch faces တွေ အတွက် Zenwatch Manager ကို ဖုန်းမှာထည့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ မဟုတ်ရင် အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ --Casio Watchfaces တွေကတော့ /system/priv-app ထဲထည့်မှပဲ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ TWRP ဒါမှမဟုတ် Root Explore ရှိမှရပါမယ်။ --Huawei Watch 1st gen Watchfaces က တချို့နာရီတွေမှာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ --Huawei Watch2Watchfaces တချို့လည်း အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ screen အမည်းကြီးပဲ ပေါ်နေတတ်ပါတ
လုပ်ပုံလုပ်နည်း ဗီဒီယိုကြည့်ရန် 👇👇👇👇👇 https://youtu.be/i52XFR3T_qw Xiaomi ဖုန်း အသုံးပြုသူများအတွက် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကနေ ယူနီကုဒ်စနစ် စံမြန်မာစာကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုသူများအတွက် Default ဖောင့်ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲပုံကို ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ တကယ်တန်းတော့ MIUI မှာက ယူနီကုဒ်စနစ်က ပါဝင်ပြီးသားပါ။ အဲ့ဒီယူနီကုဒ်စနစ်ထဲမှာလည်း မြန်မာဘာသာအတွက် တစ်ပါတည်းပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဇော်ဂျီဖောင့် အသုံးပြုနေကြတဲ့သူများ ယူနီကုဒ်စနစ်ထဲမှာ ပါပြီးသား စံမြန်မာစာကို ပြန်လည်အသုံးပြုလိုကြတယ်ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Home screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ Theme ထဲဝင်ပြီး ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်လေးက လူပုံလေး (My account) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာထဲက Font ထဲကို ဝင်ပါ။ ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Default ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့စာမက်ေနှာထဲက အောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ Apply ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ Reboot လုပ်မလားမေးရင် Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Reboot ဖြစ်သွားပြီး စက်ပြန်တက်လာရင် ယူနီကုဒ်စနစ် စံမြန်မာစာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်က ပါပြီးသားကို ပြန်ပြောင်းအသုံးချခြင်း
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Android OS ပေါ်မှာ Firefox browser သွင်းပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို မှန်ကန်တဲ့မြန်မာစာနဲ့ ဘယ်လိုဖတ်ရှုရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ယူနီကုဒ်စနစ်သုံး မြန်မာစာက ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် အရိုးစွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ စံနှုန်းမမီတဲ့ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသာ လူအများစုက အသုံးပြုနေကြတာဖြစ်လို့ သတင်းဌာနတွေနဲ့ နည်းပညာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသာ၊အသုံးပြုပြီး ရေးသားထားကြတာ များပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လိုလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်လိုလူမှုကွန်ယက်တွေမှာ သတင်းဌာနတွေကပေးထားတဲ့ လင့်ခ်တွေထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရင် ဖုန်းထဲမှာပါဝင်ပြီးသား ယူနီကုဒ်စနစ်သုံးဖောင့်နဲ့တွေ့တော့ စာတွေက မမှန်ကြတော့တာပါ။ အဲဒီပြဿနာကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်း ဖုန်းမှာ Root access ရှိဖို့ မလိုသလို ထူးထူးခြားခြားလည်း လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Firefox browser ကို အောက်မှာပေးထားတဲ့ ပလေးစတိုးလင့်ခ်ကနေ ဒေါင်းလုဒ်ရယူပ
(ဘာမှမရေးခင် ခေါင်းစဉ်ကို အရင် ရှင်းရမယ်။ ဖုန်းဆားဗစ်ဆရာတွေက ဒေါက်ဝှီး Tool ဆိုပြီး software ထုတ်တော့ အဲ့နာမည်လေး သဘောကျလို့ ချပ်... ဝှီး လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးမိတာပါ။ ဒေါက်ဝှီး ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာမှာ တပ်လိုက်တာနဲ့ ဝှီး ခနဲ အဆင်ပြေသွားမယ် လို့ ပြောချင်တာ။ ဒီ ကင်မရာကလည်း ချပ် ခနဲ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ဝှီး ခနဲ ပုံတန်းထွက်လာလို့ ဒီခေါင်းစဉ် ပေးမိတာပါ။ ) တကယ်က instax camera လိုချင်နေတာကြာပြီ။ ဝယ်မယ် ဝယ်မယ်နဲ့ မဝယ်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ အဲ့ဒါ မွေးနေ့လည်း ရောက်ရော သူငယ်ချင်းက "မွေးနေ့လက်ဆောင် ဘာလိုချင်လဲ" မေးတာနဲ့ အဲ့ဒါလေး လိုချင်တယ်ပြောလိုက်တာ။ သူလက်ဆောင်ပေးမှပဲ လက်ထဲရောက်တော့တယ်။ ကင်မရာမှာ mini7S ထက် ဘာတွေပိုကောင်းလဲဆိုရင် selfie ရိုက်ဖို့ lens နားမှာ mirror သေးသေးလေး ပါလာတာ နဲ့ macro ရိုက်ဖို့ attach lens လေး ပါလာတာပဲ။ battery က တခါထည့်ပြီးရင် ဖလင် ၁၀ လိပ်ထိ ရိုက်လို့ရတယ် ဆိုပါတယ်။ ဖလင်ကတော့ ရန်ကုန်က FujiFilm offical stores တွေမှာ တဘူးကို ၁၂၀၀၀ ကျပ် ၊ တခြား monochrome နဲ့ ဘောင်လှလှ ဖလင်ဆို တဘူးကို ၁၅၀၀၀ ကျပ် နဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော် လိုက်ရှာရင်း ၃၄ လမ်းက Royal camera ဆိ
ပုဂံကို ခဏတိုင်းသွားပြီး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တယ်။ လျှောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ ပုဂံကို လာလည်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ (တချို့) ပုဂံလာရကျိုး မနပ်သလိုပဲ။ တခါလာလည်း စွယ်တော်လေးဆူနဲ့ တခြား နာမည်ကြီး ဘုရားတွေပဲ ဘုရားရှိခိုးပြီးပြန်သွားကြတယ်။ သူတို့တော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး။ ကိုယ်တော့ လာရကျိုးမနပ်ဘူးလို့ သူတို့အစား နှမျောမိတယ်။ တကယ်ဆို ပုဂံမှာ ကြည့်စရာတွေ အပြည့်ပါဗျာ ။ ကြည့်ရတာ မြန်မာတွေက ပုဂံကို ဘုရားရှိခိုးဖို့ပဲလာပြီး နိူင်ငံခြားသားတွေက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို ကြည့်ဖို့လာတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ပုဂံမှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီး တည်မြဲနေတဲ့ ဗိသုကာလက်ရာတွေ ရှေးဟောင်း အနုပညာလက်ရာတွေ မှ အများကြီးပါ။ ကျွန်တော်ဆို ပုဂံသွားခါနီးတိုင်း ပုဂံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ ရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ တခါတုန်းကဆို ဆရာ ပါရဂူ ရဲ့ ပုဂံခရီးသည် စာအုပ်ဖတ်ပြီး ပုဂံရောက်သွားတာ စာအုပ်ထဲက ဘုရားတွေကို လိုက်ရှာ ပြီး ရောက်အောင်သွားတော့တာပဲ။ ပုဂံဘုရားတွေမှာ ဘီလူးပန်းဆွဲတွေ တွေ့မိတာနဲ့ ရှာဖတ်မိတဲ့စာလေး တွေ့လို့ ပြန်မျှဝေလိုက်တာပါ။ ဘီလူးပန်းဆွဲ (သို့) ဘီလူးပန်းကိုက် ဗုဒ္ဓ နဲ့ဆိုင်တဲ့သာသနိကအဆောက်ဦးတွေမှာ ဟိန္ဒူ နဲ့ဆိုင်တဲ့ အနုပ
By Htet Wai Aung - February 10, 2019
ကျွန်တော် ကင်မရာ စပြီး ရိုက်တတ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုဗလ တစ်ယောက်လည်း ကင်မရာရောဂါဝင်ပြီး Fujiflim XT-20 လေး ဝယ်လာပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဆီက ဖူဂျီလေး ငှားပြီး ဓါတ်ဖမ်း ရင်း ဒီစာတွေကို ရေးမိတာပါ။ ပထမဆုံး ကြိုက်မိတာက retro ဖြစ်နေတဲ့ camera design ပါ။ အန်းတိတ် ဖြစ်နေတဲ့ဖလင်ကင်မရာတွေ ရဲ့ ဒီဇိုင်းအတိုင်း လုပ်ထားလို့ကင်မရာလေးလွယ်ထားရရင်ကိုပဲ လှပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ က Fuji ပဲ ဝယ်ကိုင်ကြတာထင်တယ်။ ကင်မရာကို စ သုံးတော့ တိုင်ပါတ်ပါတယ်။ ခလုပ်အနေအထားတွေက Canon, Nikon နဲ့ မတူပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ Manual စာအုပ်တောင်းဖတ်ပြီးတော့ မှ ရိုက်လို့ ရသွားပါတယ်။ Aperture က Lens မှာ Ring နဲ့ adjust လုပ်ရတာပါ။ အစကတော့ ကျင့်သား မရသေး လို့ တိုင်ပါတ်ပေမယ့် နောက်တော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ Mirrorless ဆိုတော့ View Finder က EVF( Electronic View Finder) ပါပါတယ်။ EVF ဆိုတာက ပုံမှန် ကင်မရာတွေမှာလို ချောင်းကြည့်ပေါက်မှာ မှန် မဟုတ်ပဲ LED screen သေးသေးလေး တပ်ပေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကင်မရာ စကိုင်ကတည်းက mirrorless နဲ့ စရိုက်လို့လားမသိ။ Mirrorless ရဲ့ viewfinder ကို သဘောကျပါတယ်။
By Htet Wai Aung - February 07, 2019
2019 အစမှာ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်။ ရောက်တာနဲ့ ရုံးကိစ္စတွေ လုပ် ပြီးတာနဲ့ နယ်က အိမ်လေးကို တန်းပြန်။အိမ်မှာ ၄ ရက်လောက်နေပြီး ပုဂံ ကိုသွားလည်။ ပုဂံမှာ ၃ ရက်နေပြီး အိမ်ကိုပြန်။ အိမ်မှာ ၄ ရက် နေပြီး ရန်ကုန်ကို ပြန်လာ။ ရန်ကုန်မှာ ၂ ရက်ပဲနေပြီး မန္တလေးကို ပြန်သွား။ မန္တလေးမှာ ၄ ရက်နေပြီး ရန်ကုန် ကို ပြန်လည်းရောက်ရော လူလည်း ဘုန်းဘုန်းကျ တော့တာပဲ။ ဒီတခေါက် ပုဂံ မှာ လျှောက်လည်ရတာ မပျော်သလိုပဲ။ အရင်လို မနက် sun rise ကို ဘုရားတွေပေါ် တက်ကြည့်ခွင့် မပေးတော့ဘူးလေ ။ အကုန် ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီ။ တချို့ ဘုရား အသေးလေးတွေပေါ်တော့ တက်ကြည့်နေကြတာပါပဲ။ Tour Guide တွေလည်း ညည်းကြတယ်။ သူတို့ညည်းမယ်ဆိုလည်း ညည်းလောက်တယ်။January ဖြစ်တာတောင် အရင်လောက် နိူင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ မတွေ့ရဘူးလေ။ ဘုရားတွေပေါ် တက်လို့မရတော့ ဘယ်ကနေ sun rise ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာနဲ့ တမနက်လုံး နေရာလိုက်ရှာတာနဲ့ နေသာ ထွက် သွားတယ် ဘယ်ကနေ ရိုက်ရမှန်း မသိလိုက်ဘူး။ နေထွက်ပြီးတော့မှ ဓမ္မရံကြီးဆီရောက်ပြီးမှ ဝရုန်းသုံးကား ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ ညနေကျတော့ ဗူးဘုရား မှာ drone နဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာ၊ ဘုရားရောက်တော့ အမှန်အကန် ဓါတ်ပုံတွေရ
By Htet Wai Aung - February 01, 2019
မနေ့က ဘော်ဒါတစ်ယောက်နဲ့ သီချင်းတွေအကြောင်းပြောနေရင်း snuff အကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ ဘယ်သီချင်းကိုမှ ကျွန်တော် အဲ့လောက် တန်းတန်းစွဲစွဲ မကြိုက်မိဘူး။ Snuff မှာအဆိုတော် Corey Taylor ရဲ့ အသံနဲ့ Music Video က အဓိက ကျနေတယ်။ တစ်ချို့ သီချင်းစာသားတွေကို ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Corey ရဲ့ နာနာကျည်းကျည်း အသံကို ခံစားမိတယ်။ MV မှာလည်း သူ ဝုန်းဒိုင်းကျဲအောင် သရုပ်ဆောင်တာကို Acting လို့ကို မမြင်နိူင်ပဲ တကယ် ကိုယ်လည်း သူ့အတိုင်းပဲ အဲ့လိုလုပ်မိမှာပဲ ဆိုပြီး တွေးနေမိသေးတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဘာလို့ကြိုက်လဲ လို့ ကျွန်တော့်ကိုလာမေးရင် အဲ့ဒီသီချင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ လို့ပဲ ကျွန်တော် ဖြေရပါလိမ့်မယ်။ သီချင်းအစ စာသားကး Bury all your secrets in my skin ဆိုကတည်းက ထိတော့တာပဲ။ သူ့ကြောင်းတွေကို ကိုယ်က တခုမကျန်သိ အောင်သိနေတာမျိုး။ Snuff သီချင်းက Slipknot အတွက် သီချင်းရေးလေ့မရှိတဲ့ Corey ကိုယ်တိုင် သူ့ ခံစားချက်တွေ ကို ရေးထားတဲ့ သီချင်း ဖြစ်ပြီး သီချင်းကို အကြမ်းသွင်းပြီး Joey ( Drummer ) က Corey ကို ပြတဲ့အခါ Corey မျက်ရည်ပါ ကျခဲ့ပါတယ် လို့ Joey က ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်နဲ့ ဘယ်လောက်အဝေး ရောက်ရောက် တစ်နေ့နေ့ မှာတော့ အိမ်ပြန် ကြရတဲ့ အချိန်ရှိလာမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ အိမ်ကို မလွမ်းဘူး ပြောနေပေမယ့် မသိစိတ်ကတော့ အိမ်ကို အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီး လွမ်းနေမှာပါ။ အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ ခံစားချက်က အိမ်နဲ့အကြာကြီးခွဲနေ မှ သိလာပါလိမ့်မယ်။